HF29016 cawl embossed hannaankii ubaxa faafin, Shiinaha HF29016 cawl embossed hannaankii ubax ubaxa soosaarayaasha, shirkado, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
HF29016 cawlan oo gogol-xajis u ah qaabka ubaxa
Number Model: HF29016
Price: USD8-15 / SET
Details Baako: PVC BAG W
Supply Kartida: 70000-75000set / bishii
VERSATILE & LIGHTWEIGHT – Crafted using premium buttery poly velvet in the front and soft microfiber in the back for those cozy fall and winter nights. Provide ultimate lightweight and fabulous sleeping comfort with reversible user-friendly quilt design - Versatile usages as bedspread or coverlet to provide warmth and softness
LAVISH Design & MORORS –100% microfiber jilicsanaanta waarta iyo nasashada kama dambaysta ah ee caabbinta & iska caabbinta ka fiican suufka - Maqaalka 'Hypoallergenic coverlet' ayaa jidhkaaga ka dhigaysa mid cusub. Waxay leedahay muuqaalka hoose, ee hal-abuurka leh iyada oo la keenaysa qayb faahfaahin iyo xeel dheer leh qolka..Barbaarta sariirta waa iftiin ku filan in loo isticmaalo cimilada diiran, laakiin sidoo kale waxay haysaa mid u gaar ah habeen qabow.
XULASHADA MICROFIBER PREMIUM
QURUX BADAN STYLE
RAAXADA XILDHIBAANKA AH EE LAGU SAMEEYO
Naqshadaynta dib loo noqon karo
IFTIXAANKA & JILICSAN
Qoraal-warbixineedkan ayaa ah mid aad u fudud in la daryeelo. Waa Mashiinka lagu dhaqi karo biyo qabow oo leh midabbo isku mid ah. Ku qallaji kuleylka yar. Ha ku caddeynin wax caddeyn ah - No libdhi - No Yareeyn !! Waxaa loo dhisay inuu sii jiro waqti aad u dheer haddii si sax ah loo ilaaliyo.
FARXAD LEH OO RAAXO LEH
Tayada ugu sareysa iyo adeegga macaamiisha ee weyn. Wax soo saarkayagu waxay la yimaadaan tayada ugu sareysa ee heerka 100% qanacsanaanta macaamilka. Sariirta-fidintayadu waa xulasho qumman si kor loogu qaado sariirtaada laga bilaabo mid shaqeynaya oo qurux badan.
Cover Buluug Cover 3 Cadad Set Qaabdhismeedka Qaabka daabacay Cover Cotton jilicsan jilicsan
Qaab isku laablaab cad oo gogosha gogosha leh oo goglan oo loogu talagalay hudheelka
Raaxada Wave Point daabacaadda polyester sheer for qolka gogosha